Lanyard & Balastar |
Noocyada Kala Duwan ee Ciidanka
by admin on 21-06-23
Epaulet waa gabalka qurxinta ama qurxinta ee loo adeegsado astaamaha ama lagu qiimeeyo milatariga tijaabada ah, ciidamada xoogga iyo ururada kale. Hadiyadaha Quruxda Badan leh waxay soo saaraan biro, xardhan, tolmoon ama dhejisan yihiin PVC iyo calaamado garabka oo leh taageero kala duwan oo loogu talagalay xulashada macaamiisha. Wixii e ...
Dhexdhexaadyo & Calaamado Khaas ah
Calaamadaha iyo summadaha caadada ah ayaa had iyo jeer ahaa mid ka mid ah iibiyaheena ugu wanaagsan iyo alaabada dhammaystiran ee adeegsiga kala duwan iyo naqshadeynta moodada. Aad bay u kala duwan yihiin waxaana lagu dalban karaa bacaha, kabaha, koofiyadaha, alaabta carruurtu ku ciyaarto, baabuurta, alaabta guriga iyo dharka oo ay ku jiraan dharka dibadda, nigis iyo wixii la mid ah. Mid ka mid ah mo ...
Lanyard Tayo Leh Oo Tayo Leh
Suunka & suunka ayaa aad ugu badan nolol maalmeedkeena, sida suunka qoorta ee shaqaalaha xafiiska, ardayga iskuulka & xargaha ID -ga ee bandhigyada ganacsiga, suunka boorsooyinka, xargaha bilada, xariga eyga & qoorta, suunka gaaban oo leh carabiner, suunka taleefanka, suunka kaamerada, suunka muraayadaha, jiidista ...
Ey Waari Leashes & Collars
Eeyadu waa saaxiibka ugu daacadsan bini'aadamka maalmahanna qoysas badan ayaa leh ugu yaraan hal eey. Milkiilaha cusub ee eyga, waa inuu lahaadaa oo ay ku jiraan cuntada eyga, sariir raaxo leh, markaa waa xariga. Si kasta oo ay tahay da'da ama cabbirka eeygaaga, socodka xayawaanku waa lama huraan. Sidaa darteed ...
Xayndaabyada Tayada Custom
Laydhadhka tayada sare leh waa inay ahaadaan ikhtiyaarka mudnaanta kuu leh inaad ku muujiso summadaha, tigidhada ama kaararka aqoonsiga munaasabadaha, shaqada iyo ururada, iyo mid ka mid ah waxyaabaha xayeysiinta ugu casrisan adduunka oo dhan. Xannaanada waxaa kaloo loo adeegsan karaa dalabyo badan sida jijin, dhalo ...
Soo -saaraha Balastarka ee Disney ee La Ansixiyay
Iyada oo isbeddelka (aad loo jecel yahay) ee ka fog isticmaalka moodada dhaqsaha leh, baahida shaqsiyaadka iyo waxyaabaha asalka ah ayaa kordhay. Mararka qaarkood, markaad aragto dhejisyo qurxoon oo ku dhejisan maro, waa inaad la yaabtaa farsamooyinkeeda adag. Waxaan nahay soo saaraha ugu fiican ...